Madaxweynaha Jubbaland oo qado sharaf u sameeyay Xulka kubada Cagta Jubbaland “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jubbaland oo qado sharaf u sameeyay Xulka kubada Cagta Jubbaland “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta qado sharaf magaalada Muqdisho ugu sameeyay cayaartooyda Xulka kubadda Cagta Jubbaland ee ka qayb galaya Ciyaaraha Dowlad Goboleedyada dalka iyo Gobolka Banaadir oo lagu qabanayo magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in uu rajaynayo in Xulka kubada Cagta Jubbaland ay ku guulaystaan koobka Dowlad Goboleedyada dalka isla markana ay muujiyaan niyad wanaag iyo habdhaqan wanaagsan marka ay garoonka ku jiraan.
Axmed Madoobe wuxuu cayaartooyda ku booriyay in ay soo celiyaan tariikhdii Jubbaland ay caanka ku ahayd, isla markana ay koobka keenan Caasimada KMG ah ee Kismaayo.
Isagoo ka hadlayay sida ay uga go’an tahay in Cayaaraha la hormariyo ayuu sheegay in ay sababta ugu weyn ee Kismaayo loogu qaban waayay Ciyaaraha ay tahay in la doonayo in qaab casri ah oo Ciyaaraha waa weyn lagu qaban karo loo habeeyo garoonka kubada Cagta Waamo ee magaalada Kismaayo isla markana la hormarin doono xirfadaha kala duwan ee Ciyaaraha
Madaxweynahaha Dowlad Goboleedka Jubbaland waxaa kale oo uu balan qaaday in la abaal marin doono Ciyaartooyda Jubbaland, isla markana iyaga laga bilaabayo hanaanka shaqo abuurka dhallinyarada oo ay dhawaan meel marinayaan golaha Wasirada Jubbaland.
Xildhibaanno, Wasiiro iyo mas’uuliyiin kala duwan oo deegaan doorashadoodu ay tahay Jubbaland ayaa balan qaaday in si wanaagsan uga qayb qaadan doonaan muuraal siinta Xulka kubada Cagta Jubbaland.
Akhriso Qodobada ay ku heshiiyeen Galmudug iyo Ahlusunna+SAWIRRO